Sirdoonka Maraykanka oo Sheegay in Imaaraatku Jabsaday wakaaladda wararka Qatar | SAHAN ONLINE
Sirdoonka Maraykanka oo Sheegay in Imaaraatku Jabsaday wakaaladda wararka Qatar
NEW YORK – Wargeyska Washington Post ee dalka Maraykanka ayaa baahiyey in Saraakiil ka tirsan sirdoonka Maraykanka ay sheegeen in Imaaraatku uu jabsaday wakaaladda wararka ee dalka Qatar.
Weerarkaas ayaa lagu qaaday barta Twitterka iyo weliba wargeysyo kale oo taageera Xukuumadda.
Safiirka u fadhiya Imaaraatka Carabta Yousef al-Oraiba oo ay Washington Post la xiriirtay ayaa beeniyey warkaas.
Kooxda lagu sheegay(Hackers) ee jabsaday warbaahinta Qatar ayaa la rumeysan yahay iney telefishinka iyo warbaahinta dowladda Qatar ku shaaciyeen xog been ah oo abuurtay xiisad ka dhex bilaabatay dalalka Khaliijka.
Qoraalka beenta ah ee lagu baahiyey warbaahinta Qatar ayaa ahaa khudbad been ah oo la sheegay in uu jeediyey Amiirka Qatar Al-Thani xili uu ka qeybgalayey xaflad loo dhigay ciidamada dowladda.
Waxaana markii dambe loo adeegsaday qiil ah xayiraad lagu saaro Qatar ,wuxuuna dhigayey in Amiirka Qatar uu sheegay in dalalka Khaliijka looga baahan yahay inay xiriir dhow la yeeshaan kooxaha Xamaas iyo Xisbullah oo ay u aqoonsadaan kooxo xaq u dirir ah.
Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Dalalka Khaliijku joojiyaan cadaawada ay u hayaan dalka IRAN,waxaana intaas loo sii-raaciyey in Amiirka Qatar uu sheegay in Madaxweynaha Maraykanku uusan wakhti dheer xilka sii heyn doonin.